ဖျက်မိုးနဲ့ ဖျက်လူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ဖျက်မိုးနဲ့ ဖျက်လူ
Posted by MZS on Feb 7, 2011 in Critic, Opinions & Discussion |6comments
လပွတ္တာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအများအပြားတွင် အထက်ပါကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်များ ပေါ်ပေါက်နေ၍ တောင်သူများနှင့် ဦးပိုင်လီမိတက်အကြား တင်းမာမှုများ ပေါ်ပေါက်နေကြောင်းသိရသည်။ ကျေးရွာအုပ်စု ဥက္ကဌတစ်ဦးမှ ‘ ဟိုရက်ပိုင်းက မ.ယ.ကမှာ အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ညှိတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မ.ယ.ကလည်း ဈေးနှုန်းကို မသတ်မှတ်ပေးနိူင်ဘူး။ တောင်သူတွေက စပါး(၂)တင်းအတွက် ပေါင် (၁၀၀) ပေးရတာကို တော့သဘောတူကြတယ်။ ဦးပိုင်က စာချုပ်ထဲမှာ တစ်မျိုး၊ အပြင်မှာ တစ်မျိုးလုပ်နေတာ အားလုံးသိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ရန်ကုန် ဆန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းက သတ်မှတ်တဲ့ဈေးလို့ပြောနေတော့ ဌာနဆိုင် ရာတွေကလည်း ဘယ်သူမှ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြန်မပြောရဲကြဘူး။ ကျွန်တော့်ရွာက ချေးငွေများတဲ့ တောင် သူတွေကတော့ ပြန်မပေးသေးဘူး။ စပါးဈေး ပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်တဲ့အထိ စောင့်မယ်ပြောတယ်။ နောက်နေ့ မှာလည်း ရွာထဲမှာ ဦးပိုင်နဲ့ တောင်သူတွေကြားညှိဖို့ အစည်းအဝေးပြန်ခေါ်ထားတယ်။ အခုဟာက ပေါ်တင်ကြီး စာချုပ်ဖောက်ဖျက် တာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကုမ္ပဏီဘက်က မလိုက်နိူင်ဘူး။’ ဟု ပြောသည်။
အထက်ပါဖြစ်ရပ်များအား လေ့လာကြည့်ပါက ဖျက်မိုးဆိုသည်မှာ ကျွန်တော့်တို့ မတွန်းလှန်နိူင်သော အရာ၊ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိူင်သော သဘာဝတရားဖြစ်သည်။ တရားဖြင့်ဖြေနိူင်သည်။ ကံကိုပုံချနိူင်သည်။ သို့သော် ဖျက်လူမှာကား ကျွန်တော်တို့ လူသားများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ တောင်လိုပုံနေသော၊ စစ်အာဏာရှင်များ၏ မိသားစုစီးပွားရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းက ကျွန်တော်တို့၏ ထမင်းရှင်ဖြစ်သော အားနည်းသူ တောင်သူမိသားစု လူတန်းစားများပေါ်တွင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဗိုလ်ကျအနိူင်ကျင့်နေသည်ကို မြင်သည့်အခါ ရင်ထဲတွင် မခံချင်စိတ်များဖြစ်ရသည်။ အခြားဖြစ်ရပ်များစွာရှိမည်။ သို့သော် ယခုဖြစ်ရပ်ကို အနီးကပ် လက်တွေ့ မြင်တွေ့နေရသည့် ကျွန်တော်မှာ တားဆီးနိူင်သည့် အင်အားမရှိသည့် အတွက် ပိုမိုခံစားရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် မိမိကြုံတွေ့ရသည် ဖြစ်ရပ်ကို အခြားသူများအား သိရှိစေခြင်းဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ အဖြေပေါ် ပေါက်လာရန် မျှော်လင့်မိသည်။ ဤ post အား ဖတ်ရှုမိသူများ အနေဖြင့် လက်တလော ပေါ်ပေါက်နေသည့် တောင်သူများနှင့် ဦးပိုင်လီမိတက်အကြားမှ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများရှိပါက အကြံပြုရန်၊ ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းပေးနိူင်သည့် အနေအထားတွင် ရှိပါက ဖြေရှင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
share မယ်ဗျာနော.်forward mail လုပ်ခွင်.ပေးကြပါလို.စာရေးသူနဲ. admin ကိုတောင်းဆိုပါတယ်
သက်သက်မဲ့ဖျံကျတာ….. လူတွေများ ကိုယ့်တစ်ဘို့ပဲကြည့်တာ အားကြီးမုန်းဖို့ကောင်းတယ်……… ပြောရင်းနဲ့စိတ်ကတိုလာပြီ……မသိလို့မေးပါရစေအုံး….. သူများတွေဆီကနေ ဖျံကျပြီးမှရတဲ့ပိုက်ဆံကိုသူတို့ ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့များ သုံးနေကြလဲဆိုတာကို သိချင်လို့…. လူစိတ်ရောရှိကြသေးရဲ့လားမသိဘူး……….. ရှိတဲ့သူက ပျံလန်နေအောင်ရှိ…. မရှိတဲ့မိသားစုတွေမှာတော့ နေစဉ်နဲ့အမျှ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်နေကြရတယ်ဆိုတာ မသိလို့ပဲလား သိသိကြီးနဲ့ လား…….. ၀ဋ်မြန်မြန်လည်ပါစေတော်………
သက်သက်မဲ့ဖျံကျတာ….. လူတွေများ ကိုယ့်တစ်ဘို့ပဲကြည့်တာ အားကြီးမုန်းဖို့ကောင်းတယ်……… ပြောရင်းနဲ့စိတ်ကတိုလာပြီ……မသိလို့မေးပါရစေအုံး….. သူများတွေဆီကနေ ဖျံကျပြီးမှရတဲ့ပိုက်ဆံကိုသူတို့ ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့များ သုံးနေကြလဲဆိုတာကို သိချင်လို့…. လူစိတ်ရောရှိကြသေးရဲ့လားမသိဘူး……….. ရှိတဲ့သူက ပျံလန်နေအောင်ရှိ…. မရှိတဲ့မိသားစုတွေမှာတော့ နေစဉ်နဲ့အမျှ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်နေကြရတယ်ဆိုတာ မသိလို့ပဲလား သိသိကြီးနဲ့ လား……..
သက်သက်မဲ့ဖျံကျတာ….. လူတွေများ ကိုယ့်တစ်ဘို့ပဲကြည့်တာ အားကြီးမုန်းဖို့ကောင်းတယ်……… ပြောရင်းနဲ့စိတ်ကတိုလာပြီ……မသိလို့မေးပါရစေအုံး….. ကွန်းမန့်တခုထဲကို နှစ်ခါတင်တာ…. ရွာသားစိတ်ရောရှိသေးရဲ့လားမသိဘူး……….. ပေးဆေးကွိမန်းတာ နှစ်ဆရလို့ ပျော်နေတုန်း… သဂျီးမှာတော့ ဘုရားတနေတယ်ဆိုတာ မသိလို့ပဲလား သိသိကြီးနဲ့ လား……..
ဦးကြောင်ကြီးနော်….. ကုလားမနိုင်ရခိုင်လာမဲနေတယ်…… ဒါ နှစ်ခါတင်တာမဟုတ်ဘူးနော်….. ဦးကြောင်ကြီး ရဲ့ကွန်နက်ရှင်ကမကောင်းတာ…… ဘာမှ နှစ်ဆလည်းမလိုချင်ဘူး….. နဂိုကတော့ ပိစိကွေးက ပွိုင့်ကို လိုချင်ပါသေးတယ်…. ဘာလုပ်မလို့လည်းဆိုရင် ပိစိကွေး ကျောင်းထားပေးထားတဲ့ ကိုယ်နဲ့သွေးမတော်သားမစပ် ကလေးမလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်….. သူ့ကျောင်းစရိတ်ထဲထည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးလိုချင်သေးတယ် …… ခုဆိုရင် လုံးဝမလိုချင်တော့တာ ဟိုးနေ့က တည်းကပဲ…. ဟွန်း….ဦးကြောင်ကြီးရဲ့သူကြီးကလည်း နုတ်မှာပါဟွန်း…. ဒါသူမတွေ့သေးလို့ပါ….. တွေ့တာနဲ့တခါတည်းဖျက်ပြီးသားပဲ….. ဘာမှန်းကိုမသိဘူး…… သတ္တိရှိလား…. သတ္တိရှိရင်ထွက်ခဲ့ ……. ပိစိကွေးချစ်တူနဲ့ တွေ့ပေးလိုက်မယ်ဟွန်း…….
ဒီပို့စ်က ဖတ်ပြီးသားကြီးမဟုတ်လား …. သူဂျီးကို မျက်လှည့်ပြနေတာလား